Roofbot: Puzzler Pane Iyo Roof, yemahara kwenguva shoma IPhone nhau
Mushure memazuva akati wandei ndisati ndaona chero chishandiso kana mutambo wakakodzera kutaurwa, tadzoka zvakare neRobot: Puzzler padenga, mutambo watinofanira kusvina uropi hwedu kuti tikwanise kupedzisa yega yega yega zvikamu kuti mutambo uyu unotipa watinofanira tungamira Roofie pamusoro pematenga edzimba kuti aise masimba emagetsi munzvimbo dzakakodzera. Izvo zvinogona kutaridzika kunge zvakapusa zvinova zvakaoma muchikamu chimwe nechimwe chitsva, sekuvakwa kwezvivakwa sekuchinja kunoita Roofie kuburikidza nazvo.
Mumutambo wese, tichafanirwa kutungamira Roofie kukwira pamatenga edzimba kuenda kumusoro kuitira kuti atarisana neuber-bot, iri kutora simba rese. Roofie ndiyo chete tariro yekudzivirira simba rese kurasika. Chimwe chezvinhu zvinonyanya kushamisa zvemutambo uyu mimhanzi nyudzwa mumutambo, saka kana tiine mukana wekunakidzwa nemutambo uyu nemahedhifoni zvinokurudzirwa kwazvo kuti tidaro.
Roofbot: Puzzler Pane Iyo Roof, ine mutengo wenguva dzose muApp Store ye2,99 euros, asi kwenguva yakati wandei tinogona kuirodha mahara kwenguva pfupi. Kana isu tichida kufamba nekukurumidza pamusoro pekuwana rubatsiro rwakawedzerwa, tinogona kushandisa chete mukati me-app kutenga mukati mekushandisa, kutenga ine mutengo we0,99 euros. Roofbot: Puzzler Pane Iyo Roof inoda ingangoita iOS 9 kana gare gare. Inoenderana neiyo iPhone, iPad uye iPod touch, inowanikwa mumitauro yakati wandei inosanganisira chiSpanish uye inongodarika zana MB.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » IPhone mitambo » Roofbot: Puzzler Pane Iyo Roof, yemahara kwenguva shoma
Apple Watch, iyo inonyanya kufarirwa smartwatch ino Kisimusi; 5.2M zvikamu zvakatengeswa